Gudoomiye Cabdi Xaashi oo war kasoo saaray Xiisadda ka taagan Muqdisho, Kana Soo horjeestay Guddi farmaajo Dhaariyey. |
Gudoomiye Cabdi Xaashi oo war kasoo saaray Xiisadda ka taagan Muqdisho, Kana Soo horjeestay Guddi farmaajo Dhaariyey.
Muqdisho(GNN):Gudoomiyaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Cabdi Xaashi Cabdulaahi ayaa ka hadlay xiisadda dagaal ee kasoo cusboonaatay magaalada Muqdisho.
Gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Muqdisho in ay joojiyaan colaadda isla markaana ilaaliyaan nabadda iyo xasiloonida dalka.
Waxa uu hadalkiisa intaasi si raaciyay in khilaaf walba oo taagan lagu xalliyo wada hadal iyo tanaasul loona turo dadka Soomaaliyeed.
Hadalka kasoo yeeray Gudoomiyaha Golaha Aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdulaahi ayaa imaanaya xili ay sii kordheyso xiisadda dagaal ee ka taagan magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho.
Dhinaca Kale Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullahi ayaa qoraal uu soo saaray ku shaaciyey inay sharci-darro yihiin Guddiga La Dagaalanka Musuqmaasuqa, ee shalay lagu dhaariyey Villa Somalia, maadaama aan lasoo marsiin, oo aanu soo ansixin Aqalka Sare. Hoos ka aqriso qoraalka Cabdi Xaashi.